म कर्णाली ! बन्दुकको नोकमुनि उत्सव मनाउदिनँ | OnlineChautari.com
म कर्णाली ! बन्दुकको नोकमुनि उत्सव मनाउदिनँ
September 20, 2015 | 11:54 am
संविधानसभा सुर्खेत, जुम्ला हुँदै तराइसम्म लासको पहाडमा बदलिएको छ । यो फासिवादको चौतारीबाट आव्हान गरिएको छ उत्सवका लागि । दिपावलीका लागि । एकातिर लासहरु अर्कोतिर संविधानका धाराहरु । शोकाकुल बस्तीहरुलाई दिपावली मनाउन फर्मान जारी छ , तिनै बस्तीमा गोली र संगिनहरु तैनाथ छन् । सेनाको ओहोरदोहोरले संकटकाल सम्झाउँछ । यी उत्सवभन्दा त्रासदी बाँडिरहेका छन् तेस्र्याएर बन्दुकहरु । तिम्रो बन्दुकको नोकमुनि सप्तरीले कसरी मनाउने हो उत्सव । जुम्लाले कसरी मनाउने हो खुशी । हामी पनि तिम्रो बुटमुनि कुल्चिएर कस्तो दिपावली मनाउँ । बन्दुक तेर्साएरै आतंकराजमा गरिएको थियो संविधानसभाको चुनाउ । झन्डै तीन दर्जन जनताको रगम मासु लुछेर एक थान संविधान हतार हतार घोषणा हुँदैछ । तिम्रो खुशीयाली पनि बन्दुकको घेराभित्र नै कैद छ । शाषकहरु, तिम्रो संविधानको अवगाहनका लागि हाम्रा गला योग्य छैन
कसैले पनि अस्पष्ट चित्रहरुलाई मनोलिसाको दावी नगर । यो समाजवादी संविधान हो वा उदारवादी । यो राष्टिय पुँजीको पक्षपाति कि निजीकरणको अरवी घोडा । समयको दौडमा प्रष्टिने नै छ । राजा र राणाहरुको ठाउँमा दस्तखत गर्ने हातहरु बदलिएका छन् संविधानका पानाहरुमा । कालो हात । गोरो हात । गहुँगोरो हात । पददलित हात । उत्पीडित हात । यी हातहरुभन्दा महत्वपूर्ण के हो भने संविधानको धाराले हुम्ला बोक्छ कि बोक्दैन ? झापा बोक्छ कि बोक्दैन ।
पार्टीको फरमानमा थरि थरिका हातहरुले कुन धारामा कसरी ताली पिट्ने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बमोजिम नै गरेका हुन् । विवेकलाई झन्डा मुन्तिर झुन्डाएरै गरिने हस्ताक्षरको मूल्य पनि महंगो नै हुन्छ । प्रत्येक धारामा संशोधनको बाढी हेर्दा लोकतन्त्रको अभ्यासजस्तो देखिए पनि त्यो रुखो र निम्छरो देखिन्थ्यो टिभीका पर्दाहरुमा । बहुमत र अल्पमत भनेको लोकतन्त्रको सार हो भने बहुमत जनताले दिएको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति कता हरायो । थ्रेस होल्ड कता हरायो । भ्रष्टचारीलाई फाँसीको व्यवस्था कता हरायो ? शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास पूर्ण रुपमा निशुल्क कता हरायो । यसकारण तिम्रो बहुमत पनि एक प्रहसन नै हो ।
तिम्रो उत्सवको सौन्दर्य प्रत्येक नेपालीले एउटै अनुभूति गरिरहेका छ्रैनन् । तिम्रो खुशीको न्वारानमा नै छन् हजार थान प्रश्नहरु । तिम्रो खुशी दुवो झैं खडेरीमा पनि हराभरा हुन सक्छ कि सक्दैन ? तिम्रो खुशी नाइल नदी झै लामो दिर्घायुले भरिएको छ कि छैन ? तिम्रो खुशी शोकमग्न थारु र मधेशीको उत्सवमा बदलिन्छ कि बदलिदैन ? तिम्रो खुशी प्रत्येक दिन अँध्यारो चिर्छ कि आक्रोशको आगोमा लपिटिन्छ ? तिम्रो खुशी घाइतेको बैशाखी र वेपत्ताको भरोसा हुन्छ कि हुँदैन ? तिम्रो खुशी नारायणहिटीका रहस्यहरुलाई पर्दाफास गर्छ कि लुकाउँछ ? तिम्रो खुशी लाउडा, धमिजा र टनकपुरहरु रोक्छ कि बढाउँछ ? तिम्रो खुशी कुर्चिको इवोला फैलाउँछ कि रोक्छ ? तिम्रो खुशी कर्णाली नदीहरु बेच्छ कि उपयोग गर्छ ? तिम्रो खुशी नातावादको बुइँ चढ्छ कि चढ्दैन ? तिम्रो खुशी लालआतंक रोक्न सक्छ कि सक्दैन ? तिम्रो खुशी डा. गोविन्दहरुको आशुँ पिउँछ कि पुच्छ ? तिम्रो खुशी विश्व बजारमा युवाहरु बेच्छ कि एतै रोक्छ ? तिम्रो खुशी रेमिट्यान्सको चर्को घाम ताप्छ कि आफ्नो पसिनाको सिचाइ आफ्नै माटोमा गर्छ र हिमाली सितलता ताप्छ ?
संविधानको प्रारम्भमा नै जव तिमीले लखेटिदिन्छौ अल्पमतका नाममा गच्छदारहरुलाई । कुनै दिन त्यो अल्पमतले नै तिमीलाई उडाइदियो भने शोकगाथा नलेख्नु , किनकी यो संविधानसभाको रचना २०५२ सालमा ३०० कार्यकर्ता लिएर तिम्रो शहरबाट हिंडेको अल्पमतले नै गरेको हो । अल्पमतहरु बहुमत र बहुमतहरु अल्पमतमा बदलिन्छन् । तिमी तिम्रो खुशी मनाउ । हाम्रा लागि कार्तिकमा जम्मा हुने दर्जनौं कुकुरहरुभन्दा बसन्तको सूचना दिने एउटा कोइली महत्वपूर्ण हो । गच्छदारहरुजस्तै लखेटिएका पात्रहरुभित्र कोइली लुकेको हुनसक्छ । देशभक्त लालबाबु पण्डितहरुमार्फत् दण्डित भइरहेका पिआरधारी ओलीहरु, कोइरालाहरु, दाहालहरु लखेटिरहेछन् एकोहोरो कालो छालालाई । कालो छाला पनि जिन्दगीका रङहरुमध्येको एउटा रङ हो । नेपालका सयौं फूलहरुमध्येको पनि एउटा फूल हो । त्यो फूल जहिल्यै दिल्लीको आवहोवामा हुर्किएको र कर्णालीको चिसो पानी आफ्नै रगतमा मात्र भएको हकदावी छ तिम्रो । दिल्लीको गीतविना तिमीलाई पनि लाग्दैन निद्रा । दिल्लीको हावा नखाई तिम्रो पनि चल्दैन श्वासप्रश्वास । तिम्रो विचारदेखि भान्छासम्म डाडुपुन्यु समाएर भारत उभिएको निर्लज्जता दूरको इतिहास भइसकेको छैन ।
सबैभन्दा ठूलो संक्रमकालको विरक्तलाग्दो भजन रोकिएको छ । उकालो चढ्नेहरु र ओरालो झर्नेहरुको बाटो प्रस्टिएको छ । यही दोवाटोमा भारतसँग नझुकेको एक थान लाहुरे गीतले बजार तताइदिएको छ । जनता सार्वभौमसत्ताका रक्षक हुन् । नझुकेको गीतका प्रशंसक हुन् । लण्डन र दिल्लीका लागि रगत पोख्ने बीरता होइन, आफ्नो मूलुक रचनामा वीरताको सौन्दर्यका पक्षपाति हुन् । कतै त्यो बीरताको गीत अलपत्र नपरोस् ।
म उत्सव मनाउदिनँ । तिमीले भर्खरै लुटेर लिएका छौ जुम्लाको एउटा फूल । जुम्लाको एउटा होनाहार युवा । हरिबहादुर कुँवर, जसलाई तिमी सहिद मान्न तयार छैनौं । म उसको दाजु । बलिदान विना न नाम, न सिमाकंन । रक्तपातविना न पहिचान न सघीयता । सत्य यो हो भने तिमीहरु स्वायत्तताका असली गायक र नायक होइनौं । त्यसकारण तिम्रो उत्सव सर्वथा नक्कली हो ।
कर्णाली स्वायत्त प्रदेश मागको आन्दोलनमा मारिएका हरिबहादुर कुँवरलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै डा. बाबुराम भट्टराई, साथमा लेखक
लक्षणहरु सारै खतरनाक छन् । कुर्चिको इवोला फैलिने छ । यो इवोलाको प्रकोपले तिम्रो खुशीलाई क्षणभंगुर नवनाओस् ।
तिमीहरु सहिदहरुलाई सहिद मान्न तयार छैनौं । युद्धलाई युद्ध मान्न तयार छैनौं । थारु, मधेशीलाई राष्ट्रिय फूल मान्न तयार छैनौं । योद्धाहरुलाई योद्धा मान्न तयार छैनौं । सत्यमाथि संकटकाल थोपरेर के दिन्छौं मुलुकलाई । नेपालको राजनीतिकशास्त्रको इतिहासको पठनमा एउटा पाठबाहेक गणतन्त्र र राजतन्त्रमा फरक दिएनौं शान्तिको अवधिभरि । त्यसैले तिम्रो खुशीलाई मैले उत्सव ठानिनँ ।
बरु तिमीहरुले पल पल गरिवहरुका खुशी लुटेका छौ । तिम्रो संविधानले शिक्षाको व्यापार रोकेन । स्वास्थ्यको ब्यापार रोकेन । म कर्णालीबाट शिक्षा किन्न त्यही काठमाण्डु धाउनु पर्ने नै छ । स्वास्थ्य किन्न काठमाडौं धाउनु नै पर्नेछ भने म खुशी किन हुनु ।
६ नं प्रदेशको नागरिकमा बदलिएको छु अहिले । यो ६ नम्बर रगतको नम्बर हो । हरिबहादुरहरुको बलिदानको नम्बर हो । तिम्रो आँखाबाट एक असक्षम, नालायक प्रदेशको नागरिक हुँ म । झरो बालिन्छ अँध्यारो चिर्न यहाँ । तिम्रो उत्सवमा म झरो बाल्न सक्दिनँ । कर्णालीको उत्सव होइन यो । कर्णाली अझै उपेक्षित छ तिम्रो संघीयतामा । कर्णालीलाई विशेष स्वायत्तताको आव्हान हाम्रो हो, जुन तिम्रो कानमा पर्दैपरेन । तिमीले त गोली दियौं, बारुद दियौं र कर्णालीको आँसु पिएर पुगेन । रगत पियौं । रक्तपिपासु शाषकको खुशीमा मैले उत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
मेरो प्यारो भाईको कसम , कर्णाली जबसम्म आत्मनिर्भर हुँदैन । हरिबहादुरहरु सहिदको सम्मान प्राप्त गर्दैनन् । मैले तिम्रो बन्दुकको नोकमुनि उत्सव मनाउदिनँ ।